Olee otú Jiri Wondershare TidyMyMusic maka Mac
TidyMyMusic maka Mac-akpaghị aka okụt na Downloads niile ozi maka gị music. Mgbe ahụ, i nwere ike ide ozi ahụ iji bụla ibe nke song dị ka ị chọrọ. Ka anyị hụ otú o si arụ ọrụ n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị music n'ọbá akwụkwọ ka usoro ihe omume
Mbubata gị music n'ọbá akwụkwọ a usoro site na ịpị bọtịnụ nke Import iTunes Library ma ọ bụ Import Obodo Files.
Nzọụkwụ 2: Iṅomi mata songs ma na-achọta duplicates
Pịa iṅomi bọtịnụ na a mmapụta window ga-agwa gị otú ọtụtụ songs mkpa dozie. Pịa Idozi Ne bọtịnụ iji malite ewepụta ọmụma nke ọ bụla egwu. N'oge usoro, duplicates nwekwara ike ahụrụ.
Nzọụkwụ 3: Gbasoo ozi na songs
Mgbe scanning dị n'elu, Họrọ Mee All ma ọ bụ Mee ka embed ozi ahụ iji ọ bụla song.
Nzọụkwụ 4: dezie ozi ma ọ bụrụ na ị na-amasị
I nwekwara ike dezie ozi mgbe n'itinye hụrụ ọmụma. Pịa pensụl na akara ngosi e gosiri na-esonụ na foto ma jupụta na-edezi ubi ma ọ bụ ịdọrọ ihe oyiyi ọ bụla na album nkà ebe.
Nzọụkwụ 5: Wepụ duplicated songs
Pịa oyiri na ala na Press Wepụ na kpaliri window mgbe i kpebiri na ị na achọghị duplicates ọ bụla ọzọ.